Mangidihidy sofina amin'ny alika | Tontolo alika
Placeholder sary Laura Torres | | aretina
Toa marary sofina ve ny alikanao tato ho ato? Rehefa mitranga izany tsy mijanona ny fikorohany ny sofiny. Mety hoe manana zavatra iray ianao, tsy mahazaka alikaola, bitika na aretina hafa. Amin'ireny tranga ireny dia mora ny manatona mpitsabo biby, fa inona no tokony ho fantatsika ao an-trano?
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny antony mety mahatonga ny sofina hangidihidy amin'ny alika sy izay azonao atao amin'ireto tranga ireto.
1 Ny alikako dia tsy hijanona amin'ny fikororohany ny sofiny sy ny fihifikifiany lohany
2 Aretin-tsofina amin'ny alika
2.1 Otitis canine: inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fironana mialoha?
3 Ahoana ny fanadiovana ny sofina amin'ny alika
4 Vokatra fanadiovana ny sofina
4.1 Epi-otika (Virbac)
4.2 Mpanadio sofina (Virbac)
4.3 Aurigel (Devious)
4.4 Otifree (Vetoquinol)
Ny alikako dia tsy hijanona amin'ny fikororohany ny sofiny sy ny fihifikifiany lohany
Matetika ny alika dia manery ny sofiny, toy ny mety hitranga amintsika toa ny manandrana manala izay manelingelina azy ireo. Tonga ny olana rehefa averina, na ny biby mahantra aza kivy na mimenomenona.
Ity sofina mangidihidy ity dia mety vokatry ny:
Dermatitis noho ny allergy
Un vatana vahiny ao amin'ny lakandrenin'ny sofina
Bibikely: manakona sofina sy manakona sarkoptika
Aretin-tsofina amin'ny alika
Otitis dia aretina mahazatra amin'ny alika. Noho izany, zava-dehibe ny madio sy maina ny sofin'ny alika mba hahasalama azy ireo. Ireo savoka sy potipoti-javatra miangona ao anatiny dia afaka mahasosotra ny sofina mivantana ary mahatonga ny microclimate tonga lafatra hamokarana ho an'ny bakteria sy ny masirasira izay mahatonga ny otitis hitombo. Raha toa ka apetraka ny fanafody, raha misy ny barazy, dia mety tsy hifandray amin'ny hoditry ny sofina ilay fanafody ary tsy misy vokany ireo fitsipika mavitrika.
Amin'ny sofina izay tena mirehitra amin'ny fantsona mihidy mihidy, tsy tokony hatao ny fanadiovana mahery setra. Noho io antony io dia zava-dehibe ny manatona mpitsabo vetza, fara fahakeliny, indray mandeha na indroa isan-taona. Ho an'ireo tranga ireo dia azo inoana fa hanoratra a ny mpitsabo fitsaboana amin'ny kortikosteroid topika sy rafitra, ankoatry ny antibiotika mandra-pahavitan'ny fivontosan'ny lakandran'ny sofina.
Amin'ny otitis miverimberina, ny hevitra fampiharana fitsaboana ozon. Na dia izany aza, any Espana dia vitsy ihany ny ivom-biby no manome an'io serivisy io.
Otitis canine: inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fironana mialoha?
Misy hazakaza toa retrievers, akoho spaniel, beagle, poodle, tandrefana havoana havoana tandrefana manana fironana lehibe hananana otitis. Na satria manana fihary mamokatra savoka ao amin'ny dermis amin'ny fantson'ny sofiny izy ireo, na satria lalina kokoa sy zoro kokoa ny lalan'ny sofiny. Ary koa, ireo an'ny Ny sofina lehibe, milentika na be volo dia mora voan'ny aretin-tsofina.
Na inona na inona karazany, misy antony hafa toy ny dermatitis atopika, faniriana hiady amin'ny bibikely kokoa rehefa mipetraka any an-tsaha na miaraka amin'ny biby maro miaraka, sns.
Noho izany, ilaina ny fahalalana ny fomba fanadiovana sofina mahazatra ao an-trano.
Ahoana ny fanadiovana ny sofina amin'ny alika
Mba hanatanterahana ny fanadiovana ny sofina dia ampiasaina ny ceruminolytic topical, io vokatra io dia manalefaka sy mamoaka ny exudates ny sofina, izany hoe ny fanangonana savoka sy ny sisa amin'ny hoditra maty.
Misy vokatra hafa izay misy keratolytic malemy, antifungal ary vokatry ny bakteria. Ireo no ho resahin'ilay mpitsabo biby amin'ny fanadiovana ao an-trano.
Raha sendra misy na ahiahiana fa mety misy a perforation ny eardrum, diovina fotsiny ny sofina rano na vahaolana masira.
Andao ary handeha hanazava amin'ny fomba tsotra ny fomba fanadiovana ny sofina alika amin'ny mpanadio sofina. Saika ny asa fanadiovan-tsofina rehetra no miasa amin'ny fomba mitovy:
Apetaho moramora amin'ny lohan'ny alika ny lohan'ilay alika ary fenoy ranon-driaka ny sofin'ilay biby. Manotra ny faritra malefaka amin'ny sofina ka mihetsika miakatra sy midina ilay ranoka. Amin'izany fomba izany no alaina ny fako avy amin'ny sofina ka avoakany.
Mitandrema rehefa mitsahatra tsy manotra! Hihifikifi-doha ny alikanao ary "hanidina" ny loto rehetra ao amin'ny lakandrenin'ny sofina.
Mandalo baolina landihazo eo amin'ny pinna an'ny sofina, na raha manana gauze tsara kokoa ianao satria tsy mamela ambiny. Aza mampiasa fonosana landihazo ao an-trano mihitsy, satria ahiana be ny miteraka ratra amin'ny alika raha tsy ampiasaina tsara. Ka ny fampiasana swab dia avela ho an'ny ekipa mpitsabo vava fotsiny.
Raha hitanao fa maloto be io dia azonao averina fanindroany.
Tadidio fa raha alika be loatra ny alikao, misy fofona ratsy, manongilana ny lohany na manelingelina azy fotsiny amin'ny fikasihan-tànana ny sofiny, ento any amin'ny mpitsabo biby natokisanao izy.
Vokatra fanadiovana ny sofina
Misy marika ara-barotra marobe amin'ny fanadiovana ny sofina. Hiresaka ny sasany amin'ireo eny an-tsena izay tena tsara isika.
Manana ity mpanadio ity keratolytic, antiseptika ary toetra mampitony.
Tsy misy alikaola na ireo akora mahery setra hafa ho an'ny hoditry ny alika.
Manakana sy manampy amin'ny fifehezana otitis ivelany ao amin'ny alikao.
Izy io dia manana keratolytic, antiseptika ary toetra mampitony.
Ny pH ara-batana dia mahatonga azy io mahazaka biby.
Tsy misy alikaola na zavatra hafa mety hanelingelina ny hoditra.
Izy io dia manana hetsika 6 hafa: ny degreaser (mamoaka savoka), ny keratolytic (manala ny hoditra maty), ny mpanadio (manadio sy mandena ny hoditry ny sofin'ny sofina), ny fifandanjana mikraoba (manampy amin'ny fifehezana bakteria sy ny holatra), ny fanamainana (amin'izany fomba izany dia misoroka ny bakteria fitomboana) ary miaro (misy moisturizer sy mpanadio mavitrika).
Su fifehezan dia: asidra salicylic 2 mg; manorata sodium 5 mg; surfionant nonionika; complexe antiadhesive (L-rhamnose, L-galactose ary L-mannose), EDTA, PCMX. Toeram-panasana malefaka.
Ny endrika asehony dia 125 ml.
Eo anelanelan'ny € 17-20 ny vidiny, ary azonao atao ny mividy azy Tsy misy vokatra.
Mpanadio sofina (Virbac)
Virbac dia manana io endrika vaporizer hafa io.
Izy io dia vahaolana isotonic micellar misy glycerides sy surfactants. Tahaka ireo teo aloha, dia manala ny fofon'ny otitis koa izy.
Na izany aza, malefaka kokoa ity vokatra ity. Andao lazaina fa fikolokoloana izany, indrindra ho an'ny alika tsy manana olana otitis. Raha misy fanangonam-be ny earwax sy ny fako, na otitis, dia tsara kokoa ny mampiasa vokatra hafa.
Ny vidiny dia manodidina ny € 10.
Ny mpanadio sofina Artero Aurigel dia ampiasaina mba hitazomana ny fahadiovan'ny pinna sy ny lakandrenin'ny alika. Izy io dia manana endrika gel izay manamora ny fampiharana azy. Ary rehefa mifampikasoka amin'ny hoditra dia mivoaka liquefies. Voadoka haingana, manalefaka ny savoka sy loto be loatra ao anatin'ny segondra vitsy.
Amin'ny endriny no ananana azy menaka hazo dite aostraliana. Antiseptika voajanahary izany.
Ny endrika dia 100 ml.
Ny vidiny dia manomboka amin'ny € 12-15, ary azonao atao ny mividy azy eto.
Miasa toa fa mamono otrikaretina izy y antiinflammatory. Calendula dia manome azy io fananana mampitony sy manasitrana raha misy ratra madinidinika sy maivana. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fanesorana ny loto amin'ny sofina ivelany, savoka ary tsiambaratelo. Mampihena ny fofon'ny otitis koa izy io. Izy io dia manana aplikante marefo izay manamora ny fampiasana azy.
Su fifehezan Izy io dia: Cremophor, rano, glycol propylene, fitrandrahana calendula, menaka basil.
ny tombony izay ananany dia:
Mora ny mampihatra azy.
Manome malefaka, hydration ary manome fanoherana ny epidermis an'ny sofina.
Mamporisika ny famoronana hoditra vaovao ary mampihena ny fofona ratsy ateraky ny otitis.
Manala ny loto ivelany, ny earwax ary ny tsiambaratelo.
Antiseptika sy anti-inflammatoire izany, ankoatra ny fanampiana ny fanasitranana ratra madinidinika
Misy endrika roa, ny iray amin'ny 60 ml ary ny iray hafa 100 ml.
Ny vidiny dia eo anelanelan'ny 7-10 €, ary azonao atao ny mividy azy eto.
Manantena izahay fa ireto torohevitra kely ireto dia nahasoa anao. Ary tadidio fa raha manana fisalasalana ianao dia mankanesa any amin'ny mpitsabo biby natokisanao, satria ny ekipan'ny veterinary irery ihany no tena afaka manampy ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Mangidihidy sofina amin'ny alika
Inona no hatao raha mihombo be ny alika rano?
Aussiedoodle karazana alika